သင် ဘဝကြင်ဖော် ရှာတော့မည်ဆိုလျှင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » သင် ဘဝကြင်ဖော် ရှာတော့မည်ဆိုလျှင်
သင် ဘဝကြင်ဖော် ရှာတော့မည်ဆိုလျှင်
Posted by Arkar11 on Sep 25, 2012 in Community & Society, Drama, Essays.. | 43 comments
ဒီနေ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကြောင့် အတွေးနယ်ချဲ့ရင်းနဲ့ ဒီပို့စ်လေး ရေးဖြစ်သွားတာပါ။ တစ်ခါမှ မရေးဖူးလို့ အရေးအသား ပြေပြစ်မှုမရှိတာကို နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးစေချင်ပါတယ်၊
၁. ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတူ ဖြစ်ရမည်
(ဘာသာကွဲယူမိပါက နောင်အချိန်တွင် စိတ်ညစ်စရာများနှင် ့ကြုံတွေ့နိုင်သည်။ မိမိမွေးလာသော
ကလေးအပေါ်တွင်လည်း စိ်တ်ရှုပ်စရာများ၊ အခက်အခဲများကြုံတွေ့နိုင်သည်။)
(အကျင့်စာရိတ္တ မကောင်းသူကို ယူမိပါက မိမိသာလျှင် တသက်လုံး စိတ်ဆင်းရဲရမည် ဖြစ်သည်)
( လက်ထပ်ပြီး နှစ်အနည်း ကြာလာပါက တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ရိုးအီသွားမည်ဖြစ်သည်။
မိမိကြင်ဖက်ကို မြင်လိုက်သည်နှင့် စိတ်ချမ်းသာမှုရှိနေရမည၊် ရုပ်ဆိုးပါက မိမိသာလျှင် စိတ်ညစ်ရမည်
( မိမိ၏ ပညာအဆင့်အတန်းထက် မနိ်မ့်သောသူ ဖြစ်ရမည်၊ ပညာမဲ့သူဖြစ်ပါက မိမိ၏ အတွေးအခေါ်ကို
သူနားမလည်နိုင်သလို သူ၏ အတွေးအခေါ်များသည်လည်း ကိုယ့်အတွက် အချည်းနည်း ဖြစ်လိမ့်မည်။
ကြာလာလျှင် မိမိကြင်ဖက်အပေါ် အထင်အမြင် သေးသွားပေလိမ့်မည်။)
၅. လုံလောက်သော စီးပွားဥစ္စာ ရှာဖွေနိုင်စွမ်း ရှိရမည်
(အထက်ပါ အချက်များနှင့် မည်မျှပင် ကိုက်ညီစေကာမူ စီးပွားဥစ္စာ ရှာဖွေနိုင်စွမ်း မရှိပါက အသိုင်းအဝိုင်းတွင် မျက်နာ ငယ်ရမည်၊ သူများစားချိန်၊သုံးနေချိန်တွင် မိမိမှာ ထိုသူများဆီမှ မျက်နာငယ်နှင့် ချေးငှားသုံးစွဲ ရလိမ့်မည်၊ မိမိသားသမီးများ ချို့တဲ့စွာ ကြီးပြင်းရလိမ့်မည်၊ သူတပါး၏ နှိမ်ချဆက်ဆံခြင်းကို ခံရမည်။)
(မိမိ ဘဝကြင်ဖော် အဖြစ်ရွေးချယ်မည့်သူ၏ မျိုးရိုးသည် နာမည်ပျက်မရှိသူ ၊ လူမျိူးရေး ဘာသာရေး အရှုပ်အရှင်းကင်းသူဖြစ်ရမည်။ သို့မဟုတ်ပါက မိမိ သားသမီးများ၏ ဘဝတွင် ထိုအရိပ်မည်းကြီးများ ကပ်ပါလာပြီး စိတ်ညစ်စရာများ၊ အနှောက်အယှက်များနှင့် ကြုံတွေ့ရမည် ဖြစ်သည်)
၆. မိမိ၏ မိသားစု အသိုင်းအဝိုင်း နှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာ နေနိုင်ရမည်
(လက်ထပ်ပြီးသည့်အခါ မိ်မိအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် သူ၏အသိုင်းအဝိုင်း နှစ်ခု ပေါင်းစပ်သွားမည် ဖြစ်သည်၊
အကယ်၍ စရိုက်ခြင်း မတူပါက မလိုလားအပ်သော စိတ်ဆင်းရဲမှုများ၊ အဆင်မပြေမှုများ ကြုံတွေ့နိုင်သည်။)
ရ. မိမိအား အမြဲတစေ ချစ်ခင်ကြင်နာပြီး စိတ်ပျော်ရွှင်အောင် ထားနိုင်သူဖြစ်ရမည်
(အထက်ပါ အချက်များနှင့် ပြည့်စုံသော်လည်း မိမိအား ချစ်ခင်ခြင်းမရှိ၊ စိတ်ပျော်ရွှင်အောင်
ထားနိုင်ခြင်းမရှိပါက လက်ထပ်သည်မှာ အချည်းနှည်းပင်ဖြစ်သည်၊)
တွေးမိသလောက် ရေးလိုက်တာပါ။ ရွာသူ/သားများ အနေနဲ့လည်း အမြင်မတူတာများ ရှိပါက
ကော်မန့်များမှာ ဖြည့်စွက်ပြီး ရေးစေချင်ပါတယ်။ ရွာထဲက သဘာရင့်၊ ဝါရင့်များရဲ့ ဆွေးနွေးချက်များကို
. . has written 1 post in this Website..
View all posts by Arkar11 →
ဟုတ်တယ်ကိုမောင်ရေ …၆ နှစ်ခုထပ်သွားတယ်…ဆောရီး
အဲလောက်ဂျီးများရင် ဂေါ်မစွံ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်
အေးလွန်းရင် ဘီအီးချ တဲ့
ရာသီအုတု ကိုယ့်ဘက်ပါတုန်း တစ်ပိုင်းလောက် သွားကစ်လိုက်ဦးမယ်
စာက စာပါ ။ တကယ်ကြိုက်လို့ ယူတော့လည်း အပေါ်က အချက်တွေနဲ့ငြိငြိ ၊ မငြိငြိ တားလို့ ရမှာမှ မဟုတ်တာပဲ ။
ရတာမရတာက ကံနဲ့ ဖူးစာပါ။
ယူပြီးရင်တော့ ဘယ်သူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်
I have never seenagal like that.
ချမ်းချမ်း သီချင်းပဲ ဆိုတော့မယ်
တကယ်ဆိုရင် အချစ်ပဲ လိုတယ် ……
အချစ်ပဲလိုတယ်ဆိုတော့ ဗိုက်ဆာရင် ဘာနဲ့ စားမှာလဲလို့ …
အပေါ်ဂ အချက်တွေနဲ့ ငြိ၊ မငြိတော့ မသိဘူး ..
ဆရာတိုက်စိုး ပြောတဲ့ အလှဆုံး မိန်းမကို ရှာယူမယ်လို့ စိတ်ကူးထားတယ်ဗျို့ …
နုနယ်ပျိုမြစ်သော အလှ ..
ဖွံ့ထွားတောင်းတင်းသော အလှ ..
အိမ်ထောင်ရှင် ပီသသော အလှ ..
ဤအလှသုံးမျိုးတွင် ခင်ပွန်း ယောက်ျားအပေါ် ကြင်နာ အနွံတာ ခံ၍ သာသမီးများအပေါ်တွင် စိတ်ရှည်သည်းခံ ဆုံးမတတ်သော မိန်းမတစ်ယောက်၏ အလှသည်သာ အလှဆုံး ဆိုပဲ …….။
၁ – ရွာအထိ ကိုယ်တိုင်သွားပါ
၂ – အိမ်ဖော်လုပ်မည့် သူ ရဲ ့မိဘများ ၊ မရှိတော့ရင် အမျိုးများရဲ ့ခွင့်ပြု ထောက်ခံခြင်းကို တောင်းပါ
၃ – တစ်လ မည်ရွေ ့မည်မျှ နှုန်းထားနှင့် ဘယ်နှနှစ်လုပ်ရမည် / အလုပ်ခိုင်းမည် ၊ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးပေးမည်ဆိုသည့်အကြောင်း ကို ထိုရွာရှိ လူကြီးများကို သက်သေထားကာ ခံဝန်ချက် ချုပ်ပါ
၄ တစ်ဆက်တည်း ၊ အိမ်ဖော်အဖြစ်လုပ်မည့်သူ၏ စာရိတ္တပိုင်းကိုပါ တစ်ခါထဲ မေးမြန်းခဲ့ပါ
၅ အိမ်ကိုခေါ်လာပြီး ၊ သင့်သလို စေခိုင်းရွေ ့ရပါပြီ
ရွာသူားများ၏ ထင်မြင်ချက်များ ၊ ဆွေးနွေးချက်များကို ထပ်မံဖတ်ရှုလိုပါအိ
အိမ်ဖော် ရှာတော့မည်ဆိုရင် ..
ဖိနပ်စီးပြီး လိုက်ရှာပါ …
အဝတ်အစားများလည်း ဝတ်ထားပါ …
လမ်းလျှောက်သွားမည် ဆိုပါက ဘယ်တစ်လှမ်း၊ ညာတစ်လှမ်း တစ်လှမ်းချင်း လှမ်းသွားပါ ..
ဤကား ကျွန်ုပ်၏ ထင်မြင်ချက်ပင် ဖြစ်ပေတာ့၏ ..
အိမ်ဖော်ခေါ်မည်ဆိုလျှင် …. အသက်ငယ်သူအပျိုဖော်ဝင်စဖြစ်ပါက အိမ်မှ လူရွယ်ယောက်ျားလေးများနှင့် အရောတဝင်ဖြစ်ပြီး မဖြစ်သင့်တာဖြစ်မည်စိုးသောကြောင့် အသက်ကြီးကြီး မိန်းမများကိုသာရွေးခေါ်သင့်ပါသည် ….. အီးကား ကျွန်မ၏ထင်မြင်ချက်ပင် ဖြစ်ပေတော့သည် …….
အိမ်မှ သက်ကြီးယောက်ျားကြီးများနှင့်လည်း အရောတဝင်ဖြစ်နို်င်သောကြောင့်
အသက်ကြီးကြီးမိန်းမများကိုလည်း မခေါ်သင့်ပါကြောင်း… …အလကားနေ
လှစ်ကနဲ ရွှေ့လိုက်တာ..ကုန္ဒြေကို မရှိ..ကြည့်လို့ကိုမရဘူး…အန်တီက
မဟန်တော့ တာ့တာ….’ကျားစောင့်’ ဘဝကလည်း မလွယ်ပါဘူး (အိမ်က ‘ကျား’
များကို ဥစ္စာခြောက်ပြီး ဥစ္စာစောင့်သဖွယ် စောင့်ရှောက်နေရသူ )
အဲဒါနဲ့ စိတ်လေလေနဲ့အခြောက်များ ခေါ်ကြည့်ရမလားအထိတောင် စိတ်ကူး
ပေါက်မိ….ဒါပေမယ့် အခြောက် စိတ်ပြောင်းတဲ့အချိန်ဆို ဟိ..ဟိ..ကိုယ်မလွယ်
ဘူးဆိုပြီး လက်လျှော့လိုက်ပြီးသကာလ နောက်ဆုံး ဘာအိမ်ဖော်မှကို မထားဖြစ်
တော့ပါဘူး ပင်ပန်းတာလေးကလွဲလို့….ငြိမ်းတယ်…အရာရာပဲ…. :ha:
အမှားပြင်ဆင်ချက်- ဣန္ဒြေ (သူများပြောချင်ဇောနဲ့ )
ရတုန်းယူသာထား….ငါ့သူငယ်ချင်း….စပါးနဲ့မယား..ပိုတယ် မရှိ့ဘူးတဲံ့ဗျ….လက်တွေတော့ တစ်ယောက်မှ့ ကိုမရှိ့သေးတာ ခက်တယ်…
အင်း… အကျိုးရှိစေတဲ့ ပို ့စ်တပုဒ်လို ့လည်းဆိုလို ့ရပါတယ်..
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ချမ်းသာ၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ဘဝ/ဘဝလက်တွဲဖော်ကို လိုချင်ကြတာချည်းဘဲ.. ဒါကတော့ ကိုယ့်ရဲ ့ဆန္ဒ.. ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း ပြန်ကြည့်စေချင်တယ်.. ကိုယ်ကရော ဘယ်လိုလူမျိုး၊ ဘယ်လိုစိတ်ထား၊ ဘယ်လို အသိပညာ အတတ်ပညာကျွမ်းကျင်သူ၊ ရုပ်ရည် ပြေပြစ် လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုအတိုင်းအတာ…စတာတွေကိုရော ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်စိစစ်ဖို ့လိုတယ်..(ဒဲ့ပြောရရင်တော့ ငါကရော ဘာကောင်လဲပေါ့ :-) ).. သိပ်ပြီး ဒါဆိုဒါမှ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ သေချာတယ် လူပျိုကြီး/အပျိုကြီးဖြစ်ဖို ့..
စိုင်းထီးဆိုင် သီချင်းစာသားလေးကို အမှတ်ရမိလို ့ပါ.. “နီးစပ်တာနဲ ့ရောင့်ရဲရကြတာဘဲ” တဲ့.. စိတ်ချင်း အနေချင်း ခံယူချက်ချင်း ကိုယ်လိုချင်တာနဲ့ဘယ်တော့မှ တစ်ထပ်တည်းတော့ မကျနိုင်ပါဘူး…
အမှတ်တရစာသားတစ်ခုကတော့ ”No Man Is Perfect” :-) :-) :-)
ကိုငြီမ်းချမ်းပြောတာမှန်ပါတယ်..ကိုယ်ကိုတိုင်က အဲဒီအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံမှ ကိုယ်နဲ့လက်တွဲမဲ့သူအပေါ်မှာ အဲဒီလိုအချက်တွေ မျှော်လင့်လို့ရမှာပေါ့နော်… ဒီရွာထဲက ရွာသူတွေက ဒီအချက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံပြီးသား ဖြစ်မှာပါ… perfect ဖြစ်တာ မရှိပေမယ့် ကျနော်တို့ကြားနေကြ စကားလိုပေါ့…. President လောက်မှန်းမှ တခါးစောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့…
ကော်မန့်ချီးမြင့်သူများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…ဒီပိုုစ့်က ရွာသူတွေကိုညွှန်းပြီးရေးထားတာပါ..
ရော် … ခက်ပြီ …. ခင်ဗျားက …သိမ်းကျုံးပြီး တဲ့တဲ့ ဗျင်းထားပါလား ။
ရွာသူတွေကို ညွှန်းထားတယ် ဆိုတာ ဘာစကား လဲ …. ။ ရွာသူတွေက … ပေါက်လွတ်ပဲစား ၊ ဗရမ်းဗတာဖြစ်ပြီး … သုံးစားမရဘူးလို့ ဆိုလိုတာလား ….သိပ်စိတ်မပူပါနဲ့ …. ကိုယ့်ကိစ္စပဲ ကိုယ်ပူပါ .. ။ ယောင်ရာ ဆီလူးနေတာတော့ .. အားနာစရာတွေဖြစ်ကုန်ပြီ … ။
ဒီလို အရည်ချင်းတွေ ရှိတဲ့ မိန်းမမျိုးကို မှန်းတဲ့ ယောကျာ်းကရော .. ဘယ်လောက်တောင် … မြင့်မြတ်ပြီး ၊ အားကိုးချင်စရာကောင်းမလဲ သိချင်စမ်းပါတယ် ။ ကျွန်မကတော့ .. ယောကျာ်းဆိုလျှင် .. ဘာကောင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာတွေပိုင်ပိုင် .. ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ စိတ်ဓါတ်နိမ့်ကျနေလျှင် ..အထင်ကို မကြီးဘူး … အထူးသဖြင့် လူတတ်ကြီးလုပ်ပြီး ၊ ဟုတ်သလိုလိုနဲ့ ပုတ်ခတ်ပြောဆိုတတ်တဲ့ ယောကျာ်းမျိုးဆို …ပိုပြီး ရွံ့မုန်းပေါ့ ။ အပြောကြီးတဲ့ လူတွေ နောက်ဆုံးတော့လည်း .. နွားမ ရွံ ့ပိတ်တွေနဲ့ ရတတ်ကြပါတယ် …
မယောင်ရာဆီလူးလို့ ပြောတာ … :chee:
မအိတုံရေ နားလည်မှု လွဲနေပြီထင်တယ်…
ကျနော်ရေးတာက မိန်းခလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုရင်
ယောက်ကျားလေးတွေပေါ်မှာ စဉ်းစားသင့်တဲ့ အချက်တွေကို ရေးတာပါ..
ဒီကရွာသူတွေကို စော်ကားလိုစိတ် အလျှင်းမရှိပါ…
ရွာသူတွေကို စော်ကားလိုစိတ် အလျှင်းမရှိပါလို့ ရေးတာ မြင်ရတော့ ဝမ်းသာသလိုလိုဖြစ်မိပေမယ့် … ဒီပိုုစ့်က ရွာသူတွေကိုညွှန်းပြီးရေးထားတာပါ.. ဆိုတဲ့ စကားရဲ့ အသွားလာကိုတော့ မနှစ်မျို့တာ အမှန်ပါပဲ ။
အိမ်ထောင်ဖက်တွေ့လို့ မင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုလျှင် ဖိတ်ပါ ။ etone.mandalaygazette@gmail.com အချက်ဘယ်နှစ်ချက်လောက်နဲ့ ကိုက်ညီပြီး ရွေးချယ်ထားတာလဲလို့ သိချင်မိလို့ပါ ။ :harr:
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ..စိတ်ဇောလေး နည်းနည်းလျော့ပြီး ကျွန်မသိချင်နေတာ မေးပါဦးမယ် … ။ လူတိုင်းကတော့ ကောင်းပေ့ညွှန် ့ပေဆိုတာမျိုး လိုချင်တာ ကျွန်မလက်ခံပါတယ် … ။ ကောင်းပေ့ ညွှန့်ပေ ့ဆိုတာမျိုး .. ရယူဖို့ …. ကိုယ်တိုင်ကရော ဘယ်လောက် ကွန်ဖီးဒန့် ရှိသလဲ ဆိုတာပါ ။ ကိုယ့်မှာလည်း ပစ္စည်းကောင်းကို ထိန်းသိမ်းဖို့ ထိုက်တန်တဲ့ အရည်ချင်း ရှိရဦးမယ် မဟုတ်လား … ။ ကျွန်မအယူအဆကတော့ …ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းမပိုင်ဆိုင်ရလျှင်နေ … ပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ပစ္စည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတာပါပဲ …. ။
လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲခွင့်ရှိပါတယ် …. တင်စီးစော်ကားတာမျိုး မပါလျှင်ပေါ့ ။
နှလုံးသားနဲ့.. အဆင်ပြေရင်.. ယူပါ..
အဆင်မပြေရင်.. ညှိပြီး.. ထိုက်သင့်တဲ့တောင်းပန်လျှော်ကြေးပေးပြီး.. ပြန်ကွဲပါ..။
ကျွန်မ အိမ်ထောင်သည် တစ်ယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ ဝေဖန်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ……
၃. ရုပ်အဆင်းအဂ်ါပြေပြစ်ရမည် ……
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်လို့ယူထားကြတာ ရုပ်ရည်တွေက အဓိကမကြဘူးလို့ထင်ပါတယ် …. စိတ်ဓာတ်လေးသာအဓိကပါ …. ရုပ်ဘယ်လောက်ပဲချောချော မိမိခင်ပွန်းသည်အပေါ် စိတ်သဘောထား မကောင်းတဲ့ ဇနီးသည်တစ်ယောက်ကို ဘယ်ခင်ပွန်းကမှ ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှာမဟုတ်ပါဘူး …..
ဒီအချက်ကို လုံးဝကန့်ကွက်ပါတယ် …. မိန်းမတစ်ယောက်က စီးပွားရှာဖို့ထက် ခင်ပွန်းသည် ရှာဖွေထားတာတွေကို စုတတ်ဆောင်းတတ်လှူတတ်တန်းတတ်ဖို့သာလိုပါတယ် … သိမ်းထုပ်သေချာ ဆိုသလိုပေ့ါ …. ယောကျာ်းယူပြီး ယောက်ျားနဲ့စီးပွားအပြိုင်ရှာတဲ့ မိန်းမက ယောက်ျားကိုတန်းညှိမှာကို မကြောက်ဘူးလား … ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကလည်း စီးပွားရှာသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် …
ဒီအချက်ကို လက်ခံပါတယ် … ဒါပေမယ့် တစ်ချို့သောမိသားစုတွေက အတ္တကြီးတတ်ကြတယ် င့ါတူင့ါသားင့ါသွေး ဒါမျိုးပဲကြည့်တတ်သူတွေကို ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတာ အလွန်ကိုခဲယဉ်းလှပါတယ် … ခင်ပွန်းသည်ဘက်က မိဘဆွေမျိုးကလည်း သားရဲ့မိန်းမကို သမီးလိုလက်ခံနိုင်စွမ်းရှိဖို့လိုပါတယ် ….
သူတစ်ပါးချစ်တာခံချင်ရင် ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူချစ်အောင် အားကိုးအောင် အထင်ကြီးအောင် နေတတ်ထိုင်တတ် စီးပွားရှာတတ်ရပါမယ် …. ငါအပြင်မှာ စီးပွားထွက်ရှာတယ် အိမ်ပြန်လာရင် အားလုံးအဆင်သင့်ခူး ခပ်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်နေရမယ်ဆိုတဲ့ အတ္တစွဲတွေကိုလည်း ယောက်ျားလေးတွေဘက်က လျှော့သင့်ပါတယ် … တကယ်အိမ်မှုကိစ္စလုပ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကလည်း အိမ်မှာ မိမိရဲ့ မိသားစုအတွက် မိုးလင်းဈေးသွားချိန်ကနေ ချက်ပြုတ်စီမံ လျှောက်ဖွတ် သားတွေသမီးတွေပညာရေး ယောက်ျားအတွက်အချိန်မီအောင် သူတို့ခမျာလည်း တစ်နေကုန် အိမ်မှာ လုံးပန်းနေရတယ်ဆိုတာကိုလည်း မမေ့သင့်ပါဘူး ….မောင်တထမ်း မယ်တရွက်ဆိုတာ အလုပ်လုပ်တာကို ပြောသလို မိမိဇနီးသည်ရဲ့ အိမ်မှုကိစ္စတွေကို သူနဲ့တန်းတူ ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးသင့်ပါတယ်…
ယောက်ျားလေးတွေဘက်က လိုချင်တာတွေရှိသလို မိန်းကလေးတွေဘက်ကလည်း မျှော်လင့်ချက်တွေရှိပါတယ် ……….
အစ်မခိုင်ရေ…ကျနော့်ရဲ့ အရေးအသားလိုအပ်ချက်ကြောင့် နားလည်မှုတွေလွဲကုန်ပြီ…
ကျနော်ရေးတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အကယ်၍ ကိုယ့်သမီး၊ ကိုယ့်တူမတွေ အနေနဲ့ ဘဝကြင်ဖော်စဉ်းစားတော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုယောက်ကျားမျိုးကို စဉ်းစားသင့်သလဲ
အမနားလည်မှုမလွဲပါဘူး …. ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်က ရေးထားတဲ့ပို့စ်ဖြစ်လို့ မိန်းကလေး ဘက်ကအမြင်နဲ့ပြန်ရေးပေးတာ … ကိုအာကာရဲ့စာကို ဖတ်ကတည်းက အိမ်ထောင်သည် တစ်ယောက်ခံစားချက်နဲ့တင်ပြတာသိပါတယ် ….. အိမ်ထောင်မကျသေးတဲ့သူတွေ ဆင်ခြင်ဖို့လို အပ်သလို အိမ်ထောင်ကျပြီးသားလူတွေကလည်း ဒီလိုအခက်အခဲဒုက္ခတွေရင်ဆိုင်ရရင် ကိုယ့်ဘက်လိုအပ်ချက်တွေကိုပြန်ပြင်တတ်ဖို့အမတင်ပြထားတာပါ ….
အမရှင်းပြတဲ့ ပထမအချက်ဆိုရင် …. အမကရုပ်ဆိုးပါတယ် … ဒါပေမယ့် အမအမျိုးသားက အမကို အဲသလိုမမြင်ဘူး … သူ့အပေါ်ကို အမစိတ်ထားဖြူစင်လို့လေ …. ဒါကြောင့် ရုပ်အဓိကမကျဘူးလို့ ပြောတာပါ …….
ဒုတိယအချက်ဆိုရင် …. အမကစီးပွားရှာတော့ အိမ်မှုကိစ္စတွေကို လစ်ဟင်းပြီး အိမ်ထောင်တာဝန်မကျေတော့ဘူး … မိန်းမတစ်ယောက်က စီးပွားရှာနိုင်တော့ ငါရှာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ မာန်အမမှာရှိတယ် … အဲဒါအိမ်ထောင်ရေးမှာ အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ် …. စီးပွားရှာနိုင်လေ လောဘတက်လာလေပဲလေ .. အဲဒီနောက်ကို ကောက်ကောက်ပါအောင်လုပ်ချင်လာတယ် …..
တတိယအချက်ကတော့ … ကိုယ်လက်ထပ်မယ့်ဇနီးလောင်းကို ကိုယ့်မိဘဆွေမျိုးနဲ့ အဆင်ပြေစေချင်ရင် သူ့တစ်ယောက်တည်းဆွဲမညှိပဲ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ကိုယ်ကအဆင်ပြေအောင် ဆွဲညှိတတ်ရင် ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ် ……
နောက်ဆုံးအချက်က …. အိမ်ထောင်မကျခင်ကတည်းက အဲဒီကိစ္စကို အကျေအလည် ဆွေးနွေးပြီးမှ ယူသင့်ပါတယ် …. အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ ဂရုမစိုက်တော့ဘူးလို့ ထင်ရင်တော့ …….ကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်တာခံချင်ရင် သူတစ်ပါးကိုလည်း ဂရုစိုက်ရမယ်လေ …..
ကိုအာကာရေ …….အိမ်ထောင်ရေးမှာ အဆင်မပြေမှုများရှိခဲ့ရင် သမီးရည်းစားတုန်းက ချစ်ခဲ့တာလေးတွေ ထားခဲ့တဲ့စိတ်လေးတွေ ပြန်တွေးပြီးခွင့်လွှတ်လိုက်ပါနော် ………
ယောက္ခမရယ် … … တူညား အဲ့လာတွေ အကုန်သိပါတယ် …. ။ ကွန်ဖီးဒန့်အပြည့်ရှိပါတယ် … အပြင်ထွက် စီးပွားရှာရင်း ၊ အိမ်မှုကိစ္စတွေလဲ မလစ်ဟင်းအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ် .. အိမ်ရှေ့ခုနှစ်အိမ် ၊ အိမ်နောက်ခုနှစ်အိမ်တင်မကဘူး … ဟိုဘက်အမျိုး ဒီဘက်အမျိုး .. အကုန်လုံးနဲ့ အဆင်ပြေအောင်လည်း နေတတ်တဲ့အပြင် … ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းအောင်လည်း .. .. ထမင်းလည်းကျွေး ၊နင်းလည်းပေးပြီး စည်းရုံးရေး ဆင်းတတ်ပါတယ် …။ လင်ကိုဘုရား သားကိုသခင်လိုလည်း ပြုစုမှာပါ ..
အဟီး ……. သားလေး မြန်မြန် မစပါလားနော် …. ခွိခွိ
အစ်မရဲ့ အတွေးတွေကို ဝေမျှတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ..
ကျနော်သိတဲ့ ညီမလေးတစ်ယောက်ဆို ချစ်တဲ့သူနဲ့ညားပေမယ့်
ကြာလာတော့ သူ့ခင်ပွန်းက ပညာတတ်ပြီး အလုပ်ရှိပေမယ့်
ရတဲ့လစာနဲ့ လူတန်းစေ့ မသုံးနိုင်တော့ မိန်းမဖြစ်တဲ့သူက
ငွေကြေးပြည့်စုံတဲ့ လူတွေနဲ့ ယှဉ်တတ်လာတယ်..သူ့ခင်ပွန်းက
ပညာတတ်ပေမယ့် စီးပွားရေး မလုပ်တတ်ဖူးလေ… အဲဒီတော့
ကတောက်ကဆတွေ ဖြစ်ကုန်ရော… အဲဒါကို ကြည့်ပြီး ညီမငယ်တွေ
လက်ထပ်တဲ့အခါ နောင်စိတ်မညစ်ရအောင် စဉ်းစားသင့်တဲ့ အချက်တွေကို
ရေးကြည့်တာပါ…ဒီက ရွာသူ/သားတွေရဲ့ ယူဆချက်တွေကို ဖတ်ချင်တာလည်း
စိတ်ဆိုးပြေအောင်ထပ်ရှင်းပြပါရစေ…အပေါ်မှာ ရွာသားပေးထားတဲ့ကော်မန်းတွေကိုကြည့်ပြီး ရွာသားတွေကို ညွှန်းပြီးရေးတယ်ထင်မှာစိုးလို့ “ဒီပိုုစ့်က ရွာသူတွေကိုညွှန်းပြီးရေးထားတာပါ..” လို့ပြောတာပါ..
ကျနော်ရေးတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အကယ်၍ ကိုယ့်သမီး၊ ကိုယ့်တူမတွေ အနေနဲ့ ဘဝကြင်ဖော်စဉ်းစားတော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုယောက်ကျားမျိုးကို စဉ်းစားသင့်သလဲ ဆိုတာကို ရေ။တာပါ… အရွေးမမှားစေချင်လို့ပါ…
ဖိတ်စာတော့ ပို့နိုင်မှာ မ ဟုတ်တော့ဘူး…သားလေးတောင်ရနေပြီ ..:)
အထူးတလည်ပြန်ရှင်းစရာ မလိုပါဘူး ကိုအာကာရေ ။
ကျွန်မ စိတ်မဆိုးပါဘူး… ဖတ်ဖတ်ချင်းက နည်းနည်း ဖုသွားရုံလောက်ပါ … ။ အားနာပါတယ် .. လက်ဆပြင်းသွားရင် ဆောရီးပါ ….တစ်ခါတစ်လေ .. စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ပြောတတ်၊ ရေးတတ်လို့ပါ ။
ဒါနဲ့သားလေး က ဘယ်နှနှစ်လဲ .. ချောလား ဟင် … ဟီး :harr:
ချွေးမလေး များနေပြီနော် …. လွတ်ကုန်တော့မယ် … လွတ်ကုန်တော့မယ် …..
ကိုအာကာသားလေးက ဝဝဖြူဖြူလေးတဲ့ နံမည်ကတော့ ကြေးအိုးဆိုင်ဆိုလားပဲ … ဟဲ ဟဲ ဟဲ
သားလေးက မအေနဲ့တူတော့ချောပါတယ်.. ၂ နှစ်တောင် မပြည့်သေးဘူး..မျောက်မူးလဲအောင် ဆော့တတ်နေပြီ…ထိန်းပေးချင်ရင်ပြော..ပို့ပေးထားလိုက်မယ်…
တကယ့်တော့.. အဲ့ဒါတွေ မလိုပါဖူး.. တားအတွက်က
ဟဲလေးသီချင်းလေ… ဒီကောင်မလေးကတော့ အောက်သက်ကျေတယ်..
ကဗျာဆန်အောင် သူ့အလုပ်က မလှပပေမယ့်.. အိုဇာတာကောင်းဖို့ဆိုလားပဲ…
ယောက်ျားကောင်း မောင်းမတစ်ထောင်တဲ့… ဒီလိုပဲ
ရှာဖွေလေ တွေ့ရှိလေ ဖြစ်သွားမှာဘော့ဗျာ…
ပယ်နာတီတောင် ငါးလုံးသွင်းပီး အနိုင်အရှူံးမပေါ်မချင်း..
ဆုံးဖြတ်ရသေးဒါပဲ မဟုတ်လား… အဟီးး
အောက်က မောင်းမ ဆိုဒဲ့ အပိုဒ်ဂျီးဂို
အဲ .. ထောက်ခံပါဒယ် …
၂။ တိုင်းရင်းသူ ဖြစ်ရမယ် ( ဗမာ ဆိုရင် အမေနဲ့ အဆင် ပြေဖို့ မလွယ်ဘူး ။ အမေ ကလည်း ဗမာလေ ။ ယောက်ခမ နဲ့ ချွေးမ ပြသနာ က ဗမာတွေ မှာသာ အဖြစ် များသဗျ ! )
၃။အမေ နဲ့ အဆင်ပြေရမယ်
ကျွန်တော့ညီ အတွက် ဆိုရင် ပြောပါတယ် ။ လျှောက်ရေးသွားတာနော် ! တကယ် !
သတ်မှတ်ချက်တွေကလည်း ချော်ထွက်တာ များပါတယ်…
(တခါတလေ) ဦးနှောက်ကိုတောင် ရှောင်ကွင်းတတ်ကြသေးတယ်….
– ဘာသာတူချင်းဆို ပိုကောင်းမယ်…
ဘာသာတူချင်းဆို ညှိစရာမလိုဘဲ ဘုရားသွား၊ကျောင်းတက် အမြဲအဆင်ပြေနေမှာပါ…
ဘာသာမတူရင်တော့ မယူခင်ကတည်းက ကိုယ်က ရာဇသံပေးထားလို့ အောင်မြင်
ရင်တော့ ယူကြပါ။ သဘောတူလို့ယူပြီးမှ ကိုယ့်ဘာသာထဲ အတင်းမဝင်ခိုင်းသင့်ပါဘူး။
အသိ သူငယ်ချင်းချစ်သူလင်မယားကတော့ မွတ်ကိုယူထားတာ မိန်းမကဗုဒ္ဓဘာသာ
သူ့ဘာသာကို လုံးဝအထိမခံပါဘူး။ ငါ နင့်ဘာသာထဲတော့ အဝင်မခံနိုင်ဘူး….
လက်ခံနိုင်မှ ငါ့ကိုယူပြောတော့ ယောကျာ်းကလည်း တစ်ကယ်ချစ်တော့ ယူပါတယ်။
(ဘာသာမတူသူအချင်းအချင်း ကိုယ့်ဇာတ်ကိုယ်နိုင်ရင် ယူလို့ရတယ်ဆိုတာ
– လူမျိုးတူရင် ပိုကောင်းမယ်…
လူမျိုးတူတော့ မတူတဲ့စရိုက်တွေ သိပ်ညှိစရာမလိုတော့ဘူး ထင်တယ်။ အစား
အသောက်၊အနေအထိုင်ကအစ လိုက်ဖက်ညီသွားနိုင်တယ်။စိတ်မတွေ့စရာ နည်း
– အဆင့်တူရင် ပိုကောင်းမယ်…
အဆင့်မတူရင်လည်း စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။ အကြီးကြီးမှန်းဖို့ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။
အလှမ်းဝေးလွန်းရင်လည်း ကိုယ်ပဲ စိတ်ညစ်ရမှာပါ။ အောက် အရမ်းရောက်နေတာမျိုး
လည်း မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ လက်ရှိကိုယ့်အနေအထားလေးနဲ့ တူတဲ့သူပေါ့။
– အိမ်ထောင်တစ်ခုထူထောင်ဖို့ plan ရှိရမယ်..
ဘယ်အရွယ်မှာ လက်ထပ်မယ်၊အိမ်ထောင်စတည်ဖို့ ငွေကြေးစုပြီးသားဖြစ်ရမယ်…
ဘယ်အရွယ်မှာ သား၊သမီးဘယ်နှစ်ယောက် ယူပြီးဖြစ်ရမယ် စတာတွေပေါ့….
– လက်ထပ်ပြီး အိမ်ခွဲနေနိုင်ရင် နှစ်ဖက်မိဘ၊ဆွေမျိုးပြဿနာ လျော့နည်းနိုင်မယ်….
ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ကိုယ့်မိသားစုဘဝဆိုတာကို ပိုပြီး ပီပီပြင်ပြင် ဖန်တီးနိုင်မယ်…
လျှောက်ရေးနေရင်တော့ ပြီးတော့မှာကို မဟုတ်ဘူး….မသိတော့ဘူး… :-]
ပိုစ့်ဖတ်တုန်းကတော့ ဝင်ပြီးကွန်မန့်လေးနဲ့ ဆွေးနွေးမှုလေးတွေ ရေးမလို့၊
အပေါ်ကမန့်ထားတဲ့ ကွန်မန့်ထဲကြမှ ရွာသူတွေကိုရည်ရွယ်ရေးတာဆိုတာ သိရတယ် မင်းကလည်း ရွာသူတွေရည်ရွယ်တယ်ဆိုလည်း ပိုစ့်အစမှာတော့ မညွှန်းဘူးကွာ။
တစ်ခုတော့ပြောခဲ့မယ် တကယ်ချစ်တာမှန်လို့ကတော့ ဘာအချက်မှ မလိုဘူးကွာ။
100% ထောက်ခံပါတယ် …..
တကယ်ဆို ရှစ်ပဲ လိုတယ် .. ဘာကြောင့် ကုလားတက်တာလဲ ကွယ် … အဲ မွှားလို့ … ဟီး
ဒီပိုစ့်က ရွာသူတွေအတွက် လို့ ဆိုထားလို့
*** မင်းအုပ်စိုး လိုမျိုးကိုလဲ သတိမပြုသင့်ဘူးလား လို့ ***
ပေးကလန်အတွက်ကတော့ တစ်ချက်တည်းပြည့်စုံလျှင် ရပါ၏။
၁။ ပေးကလန်စိတ်ကြိုက် ဖြစ်ရမည်။
ဘာပဲပြောပြော ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာ အချစ်ဆုံးမို့ ကိုယ်လိုချင်ရာ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်ရွေး ကိုယ်ယူ လုပ်ကြလေသဒီး…..၊